Soo-saaraha Tube-ga Quartz ee Shiinaha iyo Alaab-qeybiye | Dinglong
Tuubbadayada quartz waxay ka muuqataa daahirnimo sare, caabbinta daxalka, iyo xasilloonida kuleylka sare iyo sifooyinka farsamada. Waxaan bixinnaa noocyo kala duwan iyo cabbiro kala duwan oo ah tuubbooyinka quartz-ka iyo khubaradayada ayaa kula shaqeyn doona si loo xoojiyo codsigaaga.
Codsiyada: Laydhka, Fibre optics, Semiconductor, Solar
Waxaan haynaa wax soo saar ballaaran oo tuubbooyin quartz ah oo loogu talagalay codsiyada nalalka oo si buuxda u dabooli kara baahidaada. Alaabtayada waxaa lagu dabaqi karaa nalalka dhaqameed, nalalka baabuurta, nalalka gaarka ah, jeermiska iyo meelaha kululaynta.
Fibreyaasha Muhiimka ah waxaa loo adeegsadaa in lagu gudbiyo iftiinka inta u dhexeysa labada daraf ee fiber-ka oo laga helo adeegsiga ballaaran ee isu-socodka fiber-optic. Waxaan ku faraxsanahay inaan qeyb ka nahay horumarkan waxaana naga go'an inaan gacan ka geysano wax soo saarka iyo fikradaha cusub si aan ula kulanno caqabado badan. Kala duwanaanta wax soo saarkayaga waxaa ka mid ah tuubbada qubeyska quartz ee nadiifka ah, usha gacanta, tuubada dheereynta, tuubada xirxiraysa fiber optics.
Muraayadda Quartz ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa codsiyada semiconductor. Tuubooyinka quartz ee Semiconductor waxay leeyihiin daahirnimo saa'id ah, hydroxyl hooseeya iyo heerkul heer sare oo iska caabin ah. Waxaan bixinnaa tuubooyin fasalka afar geesoodka ah ee semiconductor.
Tubkeena quartz fasalka qoraxda wuxuu ka koobanyahay daahirnimo sare iyo hydroxyl hooseeya. Waxaa badanaa loo adeegsadaa inay yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah qaybaha quartz ee faafitaanka iyo geeddi-socodka PE ee soosaarka unugyada qorraxda.
Hore: Budada Quartz
Xiga: Quartz Crucible
Tube Quartz Fused
Tube Quartz Heerkulka Sare
Quartz Foornada Tube
Shirkadaha Quartz Tube